Fahmitaanka Qiimaha De Minimis - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Fahmitaanka Qiimaha De Minimis
Waa maxay qiimaha de minimis sideese saameyn ugu yeelataa qarashka maraakiibta caalamiga ah?
De minimis value waa marinka laga dhaafayo soosaarida waajibaadka iyo ama cashuurta / VAT, wayna ku kala duwan yihiin wadan ahaan. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa qiimaha dhoofinta dhulka maxaa yeelay khidmadaha bixinta (khidmadaha aan bixinno si aan u yeelano canshuuraha iyo canshuuraha horay loo sii qaado ee FedEx) waxay bilaabmaan oo keliya marka qiimaha de minimis la dhaafo.
Kharashka bixinta ee aan bixinno oo aan ka qaadno waa $ 10. Si kastaba ha noqotee, waxaan sii marineynaa 88% dhimista dhoofinta ee FedEx ee dhammaan amarrada caalamiga ah, sidaas darteed khidmadda bixinta ayaa si muuqata uga muuqaneysa amarada halka qiimaha yare uu ka badan yahay iyo halka qiimaha maraakiibta iyo qiimaha dalabku wali hooseeyo.
Wadamada xubin ka ah Midowga Yurub una isticmaalaan Euro lacag ahaan dhammaantood waxay wadaagaan hal marin oo isku mid ah.
Waajibaadka iyo VAT labaduba waa laga dhaafay marka ay gaadhayaan 22 EUR.
VAT laakiin waajib ma aha waa la qiimeyn doonaa haddii ay u dhaxeyso 22 iyo 150 EUR.
Waajibaadka iyo VAT labaduba waxay ku egyihiin markay ka sarreeyaan 150 EUR.
Dalka Mareykanka, soo dejinta waa waajib iyo canshuur la'aan iyadoo ay ugu wacan tahay deeqsinimada $ 800 USD de minimis. Kadib, waxaa jira wadamo kale oo de minimis uusan aheyn mid toos ah sida muuqata, sida Australia ee A $ 1,000 de minimis. De minimis ee Australia waa farsamo ahaan A $ 1,000; si kastaba ha noqotee, haddii aad ka iibiso wax ka badan A $ 75,000 sanadkii Australiya, waxaa lagaa doonayaa inaad diiwaangeliso / dirto GST oo aanad u marin nidaamka nadiifinta kastamka. Xadka ugu yar ee Ruushka waa mid u gaar ah shaqsiyad kasta oo wax ka soo dejisa Ruushka, maxaa yeelay waxay soo dejin karaan oo keliya illaa 31 kiilo iyo illaa 1,000 EUR bishii.
Inta badan wadamada soo dejiya waxay leeyihiin de minimis qadarka canshuurta iyo canshuurta. Waad riixi kartaa astaanta calanka wareega ee cabirka bidix ee hoose ee boggan haddii aad rabto inaad aragto sida qiimaha amarku u saameynayo waajibaadka iyo canshuuraha.